अप्लस ग्लोबल ईकॉमर्स गोपनीयता नीति यसलाई पढ्नुहोस्
गोपनीयता नीति ध्यानपूर्वक उनीहरूको लागि बनाइएको छ जसले कसरी जान्न चाहन्छन् कि उनीहरूको "व्यक्तिगत जानकारी" कसरी अनलाइन प्रयोग भइरहेको छ। व्यक्तिगत जानकारी यस सन्दर्भमा सम्बन्धित व्यक्ति पहिचान गर्न, सम्पर्क गर्न, पत्ता लगाउन वा पहिचान गर्न प्रयोग गरिन्छ।
कृपया हाम्रो गोपनीयता नीति पढ्नुहोस् कि हामी कसरी डाटा स ,्कलन गर्छौं, यसलाई प्रयोग गर्छौं, सुरक्षित गर्छौं, वा हाम्रो वेबसाइट अनुसार ह्याण्डल गर्छौं।
व्यक्तिगत जानकारी ब्लग वा वेबसाइट भ्रमणको बेला हामीद्वारा संकलित
दर्ता र परामर्श फारम भरिए पछि, हामी निम्न जानकारीहरू स collect्कलन गर्दछौं: आगन्तुकको नाम, ईमेल ठेगाना, फोन नम्बर (वैकल्पिक), र अन्य विवरणहरू सहमत भई सेवामा निर्भर गर्दै।
हामी कसरी जानकारी स collect्कलन गर्छौं?
हामी परामर्श फारम भरिएको बेला, प्रत्यक्ष कुराकानी, वा हाम्रो साइटमा पंजीकरण गर्दा आगन्तुकको जानकारी स collect्कलन गर्दछौं।
हामी स collected्कलन गरिएको जानकारी कसरी प्रयोग गर्छौं?
हामी संकलन गरिएको जानकारीलाई निम्न तरिकाले प्रयोग गर्न सक्छौं:
तपाईंको अनुभव निजीकृत गर्न र भविष्यमा तपाईंलाई मनपर्ने वा मनपर्न सक्ने सामग्री र उत्पादनको प्रकार प्रदान गर्न।
तपाईंको क्वेरी वा अनुरोधको जवाफमा राम्रो सेवा प्रदान गर्नुहोस्।
तपाईंको लेनदेन प्रक्रिया गर्न।
रेटिंग्स र सेवाहरू वा उत्पादहरूको समीक्षाको लागि हामी प्रस्ताव गर्दछौं।
पत्राचार अघि लाइभ अप गर्न (प्रत्यक्ष कुराकानी, ईमेल, वा फोन सोधपुछ)
हामी पीसीआई मानकमा कमजोर स्क्यानि and र / वा स्क्यान प्रयोग गर्दैनौं।
हामी केवल लेख र जानकारी प्रदान गर्दछौं र तपाईको क्रेडिट कार्ड नम्बरका लागि कहिले नसोध्ने छौं।
तपाईं द्वारा साझा गरिएको व्यक्तिगत जानकारी सुरक्षित नेटवर्कहरू पछाडि छ र डाटामा विशेष पहुँच भएका व्यक्तिले मात्र पहुँच गर्न सक्दछन्। हामीले तपाईंको सबै एकत्रित डाटा गोप्य राख्न आवश्यक छ। साथै, तपाईं द्वारा प्रदान संवेदनशील जानकारी SSL (सुरक्षित सकेट लेयर) को प्रयोग गरेर गुप्तिकरण गरिएको छ।
हामी सबै उपायहरू लिन्छौं तपाई अधिकतम सुरक्षा सुनिश्चित गर्न कुनै पनि जानकारी प्रविष्ट गर्दा, बुझाउनुहुन्छ, पहुँच गर्नुहुन्छ।
सबै भुक्तानीहरू एक भुक्तानी गेटवे प्रयोग गरी गरिन्छ र हामी कुनै रूपमा सक्षम वा हाम्रो सर्भरमा डाटा भण्डारण गर्न चाहँदैनौं।
कुकीहरू स permission्कलन गर्नु अघि हामी तपाईंको अनुमति माग्दछौं। तपाईं या त सबै कुकीहरू स्वीकार वा बन्द गर्न छनौट गर्न सक्नुहुनेछ।
हामी कुकीहरूको लागि अधिक व्यक्तिगत अनुभव प्रदान गर्न सोध्छौं। कुकीहरू बन्द गरेर वेबसाइटको केहि सुविधाहरूले काम नगर्न सक्छ तर तपाईं अझै अर्डरहरू राख्न सक्नुहुनेछ।
हामी कुनै पनि हिसाबले बिक्री, व्यापार, वा कुनै पनि तेस्रो पक्षमा कुनै पनि व्यक्तिगत हस्तान्तरण गर्दैनौं जबसम्म यो सहमत-सेवेन गरिएको सेवा द्वारा आवश्यक पर्दैन।
हामी कुनै पनि तेस्रो पार्टी प्रस्ताव वा सेवाहरू प्रस्ताव गर्दैनौं।
गुगलका विज्ञापन आवाश्यकताहरू गुगलका विज्ञापन सिद्धान्तहरूले समेट्न सक्छन्। ती उपयोगकर्ताहरु को लागी एक सकरात्मक अनुभव प्रदान गर्न को लागी राखिन्छ। यहाँ जाँच गर्नुहोस्।
Google AdSense संग रिमार्केट
Google प्रदर्शन सञ्जाल छाप रिपोर्टिङ
जनसांख्यिकी र रुचियाँ प्रतिवेदन
हामी तेर्सो-पार्टी विक्रेताहरूसँग, जस्तै गुगलले पहिलो-पार्टी कुकिजहरू प्रयोग गर्दछ (जस्तै गुगल एनालिटिक्स कूकीज) र तेस्रो-पार्टी कुकिज (जस्तै डबलक्लिक कुकी) वा अन्य तेस्रो-पक्ष पहिचानकर्ताहरू सँगसँगै कुराकानीको सम्बन्धमा डाटा कम्पाइल गर्नका लागि। विज्ञापन छाप र अन्य विज्ञापन सेवा प्रकार्यहरू जुन उनीहरू हाम्रो वेबसाइटसँग सम्बन्धित छन्।
हामी हाम्रो तेस्रो-पक्ष विक्रेताहरूसँग मात्र प्रथम-पार्टी कुकिजहरू (एनालिटिक्सका लागि) र तेस्रा-पार्टी कुकिज (डबलक्लिक कुकी) वा अन्य तेस्रो-पक्ष पहिचानकर्ताहरू विज्ञापन छाप र हाम्रो वेबसाइटसँग सम्बन्धित अन्य सम्बन्धित कार्यहरूको लागि डेटा कम्पाइल गर्न प्रयोग गर्दछौं।
हाम्रो गोपनीयता नीति लि link्क मा 'गोपनीयता' शब्द समावेश छ र माथिको पृष्ठमा सजीलै पाउन सकिन्छ।
प्रयोगकर्ताहरूले गोपनीयता नीति परिवर्तनहरूका बारे सूचना प्राप्त गर्नेछन्।
हाम्रो गोपनीयता नीति पृष्ठमा
प्रयोगकर्ताहरू आफ्नो व्यक्तिगत जानकारी परिवर्तन गर्न सक्षम छन्:
हामीलाई ई-मेल गरेर
हामी तपाईंको ईमेल ठेगाना यहाँ संकलन गर्दछौं:
जानकारी पठाउन, सोधपुछको जवाफ, र / वा अन्य अनुरोधहरू वा प्रश्नहरू पठाउन।
आदेशहरूको प्रक्रिया, जानकारी पठाउन, र सम्बन्धित अर्डरको साथ अपडेटहरू।
हामी तपाईंलाई सहमत भएका सेवामा सम्बन्धित थप जानकारी पठाउन पनि यसको प्रयोग गर्दछौं।
मौलिक लेनदेन भए पछि हाम्रा ग्राहकहरुका लागि हाम्रो भर्खरका सेवाहरू र प्रस्तावहरू मार्केट गर्नुहोस्।
यदि कुनै पनि समयमा तपाईं हाम्रो भविष्यको ईमेलबाट सदस्यता रद्द गर्न चाहानुहुन्छ भने हामीलाई ईमेल पठाउनुहोस् info@aplusglobaomotmerce.com र हामी तपाईंलाई भविष्यको सबै पत्राचारबाट हटाउनेछौं।
प्रत्यक्ष कुराकानी: https://aplusglobalecommerce.com/
फोन: + 1 775-737-0087
कृपया हाम्रो ग्राहक सेवा टीमलाई wait-१२ घण्टा कुर्नुहोस् समस्यामा तपाईंलाई फिर्ता लिनका लागि।